कोभिड-१९ चिनियाँ प्रयोगशालाबाटै फैलिएको हो, मसँग प्रमाण छ – डोनाल्ड ट्रम्प – Life Nepali
कोभिड-१९ चिनियाँ प्रयोगशालाबाटै फैलिएको हो, मसँग प्रमाण छ – डोनाल्ड ट्रम्प
काठमाण्डौ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले को रोना भा इरस (कोभिड १९) चिनियाँ प्र योगशालाबाटै फैलिएको दा’बी गरेका छन् ।एकातिर अमेरिकी जासुसी एजेन्सी कोरोना भाइरस जानीबुझी उत्पन्न नभएको बताइरहेको छ भने अमेरिकी राष्ट्र’पति ट्रम्पले यो भाइरस चीनको वुहान श हरमा रहेको प्र योगशाला बाट फैलिएको दा’बी गरेका हुन् । बिहीबार एक जना पत्रकारले ट्रम्पलाई प्रश्न ? गरे– कोरोना भा इरस” वुहान इन्स्टिच्युट अफ् भायरोलो’जीबाटै फैलिएको हो भनेर आत्मविश्वासका, साथ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ? के तपाईँसँग कुनै प्र माण छ ? यो प्रश्नको उत्तर दिँदै ट्रम्पले भने, ‘अवश्य मसँग छ ।
चीनको “प्रचारप्रसार गरिरहेकोमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई ला’ज हुनुपर्ने हो । डब्ल्यूएचओ चीनको पब्लिक रिलेशनको रुपमा काम गरिरहेको छ ।’‘चीनले जानीबुझी वा भुलवश यस्तो गल्ती” गरेको हो, यसबारेमा भने थाहा छैन । अथवा कुनै लक्ष्य पूरा गर्न गरेको हो ।मलाई थाहा छ, मानिसहरुलाई हुबेई प्रा न्तदेखि” बाहिर बाँकी चीनमा “जाने अनुमति थिएन तर पूरै विश्वमा जाने अनुमति थियो । पूरै चीनमा आवत जा’वतमा प्रति’बन्ध लगाइएको थियो तर विश्वभर जानका लागि कुनै प्रतिबन्ध थिएन । यो निकै गल त भयो । यो निकै कठिन प्रश्न ? हो” र यसको उत्तर पाउन बाँकी छ’, ट्रम्पले भने ।
कोरोना भाइरसका कारण विश्भर अहिलेसम्म ३२ लाखभन्दा धेरै सङ्क्रमित भएका छन् भने दुई लाख ३१ हजारभन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ । यद्यपि को रोनाको का रण अमेरिका सबैभन्दा धेरै प्र भावित भएको छ । सङ्क्रमित हुने र ज्या न गु माउने दुवैको सङ्ख्या अ मेरिकामा धेरै छ । अमेरिकामा १० लाख ९५ हजारभन्दा धेरैकाे सङ्क्र मण पुष्टि भएकाेमा ६३ हजार आठ सयभन्दा धेरैकाे ज्यान गएकाे छ ।काेराेना भा इरसलाई लिएर प छिल्लाे समय अमेरिका र चीनबीच वा कयुद्ध च लिरहेकाे छ । ट्रम्पले लगातार चीनमाथि आ राेप ल गाउँदै आए पनि चीनले अस्वी कार गर्दै आइरहेकाे छ ।
Previous कोभिड-१९ : कोरोना भाइरसका कारण अमेरिकामा झन्डै ४ करोड बेरोजगार
Next कतारमा २३ सय भन्दा बढी नेपाली को’रोनाबाट संक्रमित भएको आशंका